High School တွင်သိပ္ပံတရားမျှတသောစီမံကိန်းများ
ဒါဟာအထက်တန်းကျောင်းသိပ္ပံတရားမျှတသောစီမံကိန်းအားစိတ်ကူးနှင့်အတူတက်လာမယ့်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာအအေးဆုံးစိတ်ကူးအတူတက်လာရန်ပြင်းစွာသောအပြိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါသည်, ပေါင်းသင်ကသင့်ရဲ့ပညာရေးအဆင့်သင့်လျော်သောထည့်သွင်းစဉ်းစားသောခေါင်းစဉ်လိုအပ်ပါတယ်။ ငါစီစဉ်ပေးပါတယ် သိပ္ပံတရားမျှတသောစီမံကိန်းအားအတွေးအခေါ်များ အားဖြင့် ခေါင်းစဉ် , သင်မူကားယူလိုစေခြင်းငှါ, အတွေးအခေါ်များမှာကြည့် ပညာရေးအဆငျ့အရသိရသည်။
High School တွင်စီမံကိန်းများ
အထက်တန်းကျောင်းသိပ္ပံ တရားမျှတတဲ့စီမံကိန်းများကို လူတိုင်းနီးပါးတဦးတည်းလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်, ပေါင်းကတန်းများအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်ကြောင်းအတွက်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်တယ်။ သငျသညျတရားသူကြီးအသိပေးစာယူခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းအရာချင်တယ်။ အခြားသူများကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့်အကြောင်းအရာများမှာကြည့်ပါနဲ့အဖြေမရတဲ့ကျန်ကြွင်းသောအရာကိုမေးခွန်းများကိုသင်ကိုယ်တိုင်မေးနေတာပါလား? သူတို့မည်သို့စုံစမ်းစေနိုင်မည်နည်း သင်တို့ပတ်လည်ကမ္ဘာပေါ်မှာပြဿနာများအတွက်ကြည့်ပြီးသူတို့ကိုရှင်းပြသို့မဟုတ်သူတို့ကိုဖြေရှင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ဆန္ဒပြပွဲများနှင့်မော်ဒယ်များအစောပိုင်းကပညာရေးအဆင့်ဆင့်မှာလက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အထက်တန်းကျောင်းများတွင် သိပ္ပံနည်းကျနည်းလမ်း သင့်ရဲ့သိပ္ပံနည်းကျရှာဖွေတူးဖော်ရေးအတွက်အခြေခံဖြစ်သင့်သည်။
သင့်ရဲ့ကိုဘယ်လိုစိတ်ချ ခရိုဝေ့ဖ်မီးဖို , ဝေးကွာပစ္စည်းကနေအတူတူအလင်း / အပူချိန်အခြေအနေများအောက်တွင်စိုက်ပျိုးသူတို့နှင့်အတူမီးဖိုအနီးတွင်ထားရှိမျိုးစပါးပင်တစ်ပင်သို့မဟုတ်အပင်ပေါက်ရန်အတွက်၏တိုးတက်မှုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
ဦးမည် ယူဂိုဆလားဗီးယားရေ သင်နေရောင်ထဲမှာ unopened ပုလင်းစွန့်ခွာလျှင် (ရေညှိကြီးထွား) အစိမ်းရောင်အလှည့်? ဒါကြောင့်သင်အသုံးပြုရသောအမှတ်တံဆိပ်အရေးပါသလား?
တစ်ဦးအလင်း-blocking ကားရှေ့မှနျအဖုံးကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါကကားတစ်စီး၏အတွင်းပိုင်းဘယ်လောက်အအေးသလဲ? သူတို့အလုပ်လုပ်သလား?
အဆက်အသွယ်မှန်ဘီလူးဖြေရှင်းချက်များနှင့်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးကမြုံနေဖို့ပါဘူးမည်သို့မြုံဖြစ်သနည်း ဒါဟာယဉ်ကျေးမှုဆားမှမှို, မှိုနှင့်ဘက်တီးရီးယားများအတွက်ကြာအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးကြည့်ရှုပါ။ ကြောင်းကိစ္စအဘို့, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့အဆက်အသွယ်မှန်ဘီလူးအမှု၏အတွင်းပိုင်းကိုဘယ်လိုမြုံဖြစ်သနည်း
သင်တစ်ဦးပြည့်စုံစကေးကစားနိုင်ပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဂီတတူရိယာစေနိုင်သလား? ဥပမာရွှံ့, သစ်သားသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ကနေရော်ဘာတီးဝိုင်းစောင်းသို့မဟုတ်ပုလွေပါဝင်သည်ပေလိမ့်မည်။
တစ်ဦးနိုင်သလား အနက်ရောင်အလင်း မမြင်ရတဲ့အစွန်းအထင်း detect?
လိမ္မော်သီးဖျော်ရည်၏ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ်သလားကွဲပြားခြားနားသောဆံ့ ဗီတာမင်စီအဆင့်ဆင့် ?
ဘယ်လိုထိရောက်မှုရှိပါတယ် သဘာဝအခြင်တွန်းလှန် ?
လိမ္မော်သီးရရှိသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးပါနဲ့ ဗီတာမင် C ခူးခံရပြီးနောက်?
သိုလှောင်မှုအပူချိန်သီးဖျော်ရည်၏ pH ကိုထိခိုက်စေသလား
ဘယ်လိုစပါးရိတ်ရာကာလ၏အချိန်သို့မဟုတ်ရာသီဓာတုဗေဒနှင့်အစားအစာ၏အာဟာရ content တွေကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသနည်း?
ဘယ်လောက်ကြာအိမ်မှာဆံပင်အရောင်ထုတ်ကုန်သူတို့ရဲ့အရောင်ကိုင်ထားသလဲ? အမှတ်တံဆိပ်အရေးပါသလား? ဆံပင်အမျိုးအစား colorfastness ထိခိုက်စေသလား ဘယ်လိုယခင်ကုသမှု (perming ယခင် COLOR, ဖြောင့်) ကနဦးအရောငျပြင်းထန်မှုနှင့် colorfastness အကျိုးသက်ရောက်စေသနည်း?
အားလုံးလုပ်ပါ dishwashing ဆပ်ပြာ ပူဖောင်း၏တူညီသောပမာဏကိုထုတ်လုပ်? ဟင်းလျာများ၏တူညီသောအရေအတွက်သည်ကိုရှင်းလင်း?
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ် (ဥပမာ, စည်သွတ်ပဲ) ၏အာဟာရအကြောင်းအရာတူပါသနည်း
အမြဲတမ်းအမှတ်အသားများကိုဘယ်လိုအမြဲတမ်းရှိပါသလဲ အဘယ်အရာကိုအရည် (ဥပမာ, ရေ, အရက်, ရှာလကာရည်, ဆပ်ပြာဖြေရှင်းချက်) အမှင်ဖယ်ရှားပစ်ကြမည်နည်း ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ်သလား / အမှတ်အသားများအမျိုးအစားများတူညီရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်?
စားသုံးသူများ bleached စက္ကူထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်သဘာဝအရောင်စက္ကူထုတ်ကုန်များပိုနှစ်သက်ပါသလား? အဘယ်ကြောင့်?
Is ရေချိုးခန်းဆပ်ပြာ ကိုသင်အကြံပြုငွေပမာဏထက်လျော့နည်းအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်အဖြစ်ထိရောက်သော? နောက်ထပ်?
ဘယ်လိုမ သီးဖျော်ရည်၏ pH ကို အပြောင်းအလဲအချိန်နှင့်အတူ? ဘယ်လိုအပူချိန်ဓာတုပြောင်းလဲမှုနှုန်းကိုထိခိုက်စေသနည်း?
အားလုံး hairsprays အညီအမျှကောင်းစွာကိုင်သလား? အညီအမျှတာရှည်? ဆံပင်အမျိုးအစားရလဒ်များကိုထိခိုက်စေသလား
ဘယ်လိုကြည်လင်-ကြီးထွားလာအလတ်စား၏ရေငွေ့ပျံနှုန်းဟာ crystals ၏နောက်ဆုံးအရွယ်အစားကိုအကျိုးသက်ရောက်သနည်း?
သငျသညျအများအားဖြင့်သင့်ရဲ့ crystals ကြီးထွားရန်အစိုင်အခဲပျော်ဖို့ရေသို့မဟုတ်အခြားအရည်အပူပါလိမ့်မယ်။ ဒီအရည်အအေးသောမှာနှုန်း crystals ကြီးထွားလမ်းကိုထိခိုက်စေသလား
သည်အဆိုပါ crystals အပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်ရှိသနည်း
ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသောဓာတ်မြေသြဇာကိုထိခိုက်စေပါဘူး အပင်လမ်းကို ကြီးထွား? ဓာတ်မြေသြဇာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုစာရေးတံသည်အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများအပြင်, နိုက်ထရိုဂျင်, phosphorus ကိုနှင့်ပိုတက်စီယမ်များစွာကွဲပြားပမာဏင်တွေလည်းရှိတယ်။ သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောဓာတ်မြေသြဇာကိုစမ်းသပ်နှင့်, သူတို့ကအပင်တစ်ပင်၏အမြင့်ကိုအကျိုးသက်ရောက်ပုံကိုယင်း၏အရွက်၏နံပါတ်သို့မဟုတ်အရွယ်အစားကိုမြင်ရ, ပန်း, အချိန်များ၏အရေအတွက်ကိုအဓိကအားထား၏စိမျး, blooming တိုင်အောင်, အမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး, သို့မဟုတ်အခြားအချက်များနိုင်ပါတယ်။
အရောင် mulch ကိုသုံးပြီးအပင်တစ်ပင်ပေါ်တစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုပါသလား သငျသညျက၎င်း၏အမြင့်, အသီးအနှံ, ပန်းပွင့်များ၏အရေအတွက်စုစုပေါင်းစက်ရုံရဲ့အရွယ်အစား, ကြီးထွားမှုနှုန်း, သို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းရင်းများကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသောအချက်များအမြိုးအနှယျအပင်ပေါက်ရန်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေသလဲ? သငျသညျကိုစမ်းသပ်နိုင်ကြောင်းအချက်များပြင်းထန်မှု, ကြာချိန်, ဒါမှမဟုတ်အလင်း၏အမျိုးအစား, အပူချိန်, ရေပမာဏ, အချို့ဓာတုပစ္စည်းများရှိနေခြင်း / မရှိခြင်း, သို့မဟုတ်မြေဆီလွှာ၏ရှေ့မှောက်တွင် / မရှိခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ သငျသညျအညှောက်ပေါက်ကြောင်းမျိုးစပါးရာခိုင်နှုန်းသို့မဟုတ်မျိုးစပါးအညှောက်ပေါက်မှာနှုန်းကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုအပင်သူတို့ကိုအကြားအကွာအဝေးကြောင့်ထိခိုက်နေကြသနည်း allelopathy ၏အယူအဆသို့ကြည့်ရှုပါ။ ချိုမြိန်အာလူးသူတို့ကိုအနီးတွင်အပင်၏ကြီးထွားတားစီးနိုင်သောဓာတုပစ္စည်းများထုတ်လွှတ်ကြောင်းအပင် (allelochemicals) ဖြစ်ကြသည်။ ဘယ်လိုနီးစပ်အခြားစက်ရုံမွှေးအာလူးအထိကြီးထွားနိုင်သလဲ တစ်ဦး allelochemical အပင်တစ်ပင်ပေါ်မှာရှိပါဘူးအဘယျသို့သက်ရောက်မှု?
၎င်း၏အရွယ်အစားအားဖြင့်ထိခိုက်နေတဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုလား? ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားမျိုးစပါးကွဲပြားခြားနားသောအပင်ပေါက်ရန်အတွက်နှုန်းထားများသို့မဟုတ်ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသလား? အမျိုးအနွယ်ကိုအရွယ်အစားကြီးထွားမှုနှုန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်စက်ရုံ၏နောက်ဆုံးအရွယ်အစားကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါသလား?
ဘယ်လိုအအေးသိုလှောင်မှုမျိုးစေ့များအပင်ပေါက်ရန်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေသနည်း? သငျသညျထိနျးခြုပျနိုငျအချက်များမျိုးစပါးအမျိုးအစား, သိုလှောင်မှုရဲ့အရှည်, သိုလှောင်မှု၏အပူချိန်နှင့်အခြားပါဝင်သည် variable ကို ထိုကဲ့သို့သောအလင်းနှင့်စိုထိုင်းဆအဖြစ် s ကို။
အဘယ်အရာကိုအခွအေနအသီး၏အတှငျရငျ့မှညျ့ထိခိုက်စေ? Ethylene မှာကြည့်ပါနဲ့အလုံပိတ်အိတ်, အပူချိန်, အလင်း, သို့မဟုတ်အခြားအပိုင်းပိုင်းသို့မဟုတ်အသီးမချဉ်းမကပ်တစ်ဦးသီးသောအသီး enclosing ။
ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသောမြေဆီလွှာများတိုက်စားမှုကြောင့်ထိခိုက်နေကြသနည်း သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လေတိုက်သို့မဟုတ်ရေလုပ်နှင့်မြေဆီလွှာအပေါ်သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးသည်အလွန်ချမ်းအေးရေခဲသေတ္တာမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ဆိုလျှင်, သင်အေးခဲခြင်းနှင့်နွေးထွေးသံသရာ၏သက်ရောက်မှုကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုမြေဆီလွှာ၏ pH ကိုမြေဆီန်းကျင်ရေထု၏ pH ကိုဆက်စပ်သလဲ, သငျသညျနိုငျပါသညျ သင့်ကိုယ်ပိုင်သော pH စက္ကူလုပ် , မြေဆီလွှာ၏ pH ကိုစမ်းသပ်ရန်, ရေကိုထည့်သွင်း, ထို့နောက်ရေသော pH စမ်းသပ်ရန်။ နှစ်ခုတန်ဖိုးများတူညီပါသလား? မရရှိလျှင်, ထိုသူတို့ကြားကဆက်ဆံရေးရှိသလော
ဘယ်လိုနီးစပ်စက်ရုံတစ်ရုံကအလုပ်လုပ်များအတွက်ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်ဖို့ရှိသည်သနည်း? အဘယ်အရာကိုအချက်များ (မိုဃ်းကိုရွာစေ? အလင်း? လေတိုက်?) တစ်ဦးပိုးသတ်ဆေး၏ထိရောက်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုး? ယင်း၏ထိရောက်မှုဆက်ပြီးစဉ်ဘယ်လောက်သင်တစ်ဦးပိုးသတ်ဆေးမှေးမှိန်နိုင်သလဲ သဘာဝကပိုးမွှားအဟန့်ကိုဘယ်လိုထိရောက်မှုရှိပါသလဲ
အပင်တစ်ပင်ပေါ်တစ်ဦးဓာတု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကဘာလဲ? သငျသညျကိုတိုင်းတာနိုင်သောအချက်များစက်ရုံတိုးတက်မှု၏နှုန်းမှာ, အရွက်အရွယ်အစား, စက်ရုံ၏အသက် / အသေခံ, အပင်၏အရောင်နှင့်ပန်းပွင့် / ဝက်ဝံအသီးမှစွမ်းရည်များပါဝင်သည်။
တစ်ဦး Recrystallization Perform လုပ်နည်း
ရေခဲပြင် Sphere သင်ခန်းစာရဲ
အိမ်လုပ် Crystal အားလပ်ရက်တန်ဆာ
ပျောက်ကွယ်သွားမှင် Make လုပ်နည်း
Methyl salicylic တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုလျင်မြန်စွာ Saponification Perform လုပ်နည်း
အဆောက်အအုံပုံစံရေးဆွဲခြင်းစက္ကူ Make လုပ်နည်း
Gelatin ပလတ်စတစ် Make လုပ်နည်း
Bleach နှင့်ဆားအစားထိုးထံမှပိုတက်ဆီယမ် chlorate
မုန့်ဖုတ် Soda crystal ဟာတိုးတက်ကြီးပွားဖို့ကိုဘယ်လို။
အဆိုပါထိပ်တန်း 25 အကြီးမြတ်ဆုံးနိုင်ငံအဖွဲ့များ
Awesome ကိုတိရိစ္ဆာန်ဓါတ်ပုံများများ၏အများစုမှာ Epic စာရင်းအစဉ်အဆက်
Hexapods, အခြောက်အတော်များများကမျက်စိ Arthropods
ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက် analog structures များ
2002 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း: Els 4-က Man PLAYOFF ရှင်သန်နေဆဲ
ရှိတ်စပီးယား၏ 'အဆိုပါမိုဃ်းသက်မုန်တိုင်း' '
Requisitos မသန်စွမ်း la ဗီဇာမရေိမျှ inmigrante
Vocab အလေ့အကျင့် 2: အဆိုပါလည်ဆွဲ
Linear Regression အားသုံးသပ်ခြင်း
အဆိုပါ preposition '' De 'အသုံးပြုခြင်း
သင့်ရဲ့စကိတ်စီးပေါ်တွင် Ollies တိုးတက်စေူခင်းမှတစ်ဦးကအဆင့်-by-step
Pr သည်အချက်အလက် - Element ကို 59